Shina: Mitady Fanendrena ny Tranombakoky ny Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 14:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, বাংলা, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2010)
Natolotra voalohany tao amin'ny blaogy bitika an‘i Fan Jianchuan, mpanangana ny Tranombakoka Jianchuan any Chengdu ilay tetikasa. Nilaza izy fa hanaiky fanendrena avy amin'ny vahoaka izay afaka mifidy ao amin'ny tranonkalan‘ilay tranombakokany ity farany. Ny msontsivana hahafahana misafidy ireo 100 voalohany dia ny fahanteran'ilay mpiasam-panjakana voafatotry ny kolikoly, ny masombla voakasik'izany, ny fomba nampiasaina, ny toe-javatra sy ny fiantraikany teo amin'ny fiarahamonina.
Vondrona tranombakoka 15 miorina ao Chengdu, Faritanin'i Sichuan ilay Tranombakoka Jianchuan
Nilaza i Fan fa hangataka fanohanana avy amin'ny kaomitim-pifehezan'ny Antoko Kaominista mba hamadihana ilay hetsika santatra ho lasa foibe fanabeazana hiadiana amin'ny kolikoly. Nilaza izy fa tena malaza be ao amin'ny firenena ny fampiratiana mikasika ny kolikoly ataon'ny kaomitim-pifehezan'ny antoko, fa mbola mila foronina ny tranombakoka. Mihevitra izy fa hiteraka fiantraikany tsara eo amin'ny fiarahamonina ilay tranombakoka. Nanomboka nanavaka ireo ‘rakitry ny ela momba ny kolikoly’ avy amin'ny angona nanànany izy, izay ahitana ireo didim-pitsarana sy antontan-taratasy fiaikena heloka.
Mahazo valiny totoafo maro avy amin'ny aterineto ilay sosokevitra. Mihevitra i Qian Guilin (钱桂林) fa hevitra tena mampandroso hisy fiantraikany tsara eo amin'ny lafiny fanabeazana izany:
Nilaza i Victor Hugo: ‘Izay manokatra varavaram-pianarana dia manidy fonja.’ Afaka manana fiantraikany lehibe ny fanabeazana. Lehibe noho ny fivoriana na fampiratiana roa hiadiana amin'ny kolikoly ny hery sy dona ateraky ny tranombakoka iray. Afaka manampy amin'ny fametrahana soatoavina tena izy eo amin'ny fiainana sy fahefana eo anivon'ireo Sinoa manampahefana izy.
Mandritra izany fotoana izany, manondro ireo lesoka maro ao anatin'ilay sosokevitra i Sun Jindong (孙金栋):
Eo amin'ny lafiny votoaty, ahoana no hanapahanareo hevitra momba izay ho 100 voalohany? Tsy afaka tsarainao izany amin'ny alàlan'ny toerana misy ireo manampahefana, masombola voakasika, fomba nanaovana ilay kolikoly na ny taona aza, satria miovaova ireo singa fototra ireo. Tsy mitovy amin'ireo tranga ara-tantara toy ny ady nanoherana ny Japoney na fanafahana izany, izay tsy mihontsona. Noho izany, miovaova ny hevitr'ilay hoe 100 voalohany; hipoitra any aoriana any ny vaovao hanamontsana ny tampondaka eo anivon'ireo 100 voalohany, izay tsy hampisy dikany ilay ‘100 voalohany’ intsony.
Amin'ny lafiny fanondroana anarana, voalohany indrindra, nahoana moa izany no faritana toy ny ‘lohany’ ireo ‘100 voalohany’ ireo? Tigra vita taratasy avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Manararaotra ny fahefana amin'ny toerana maha-manampahefana azy izy ireo. Vao voasambotra, lasa gadra ary teboka mainty eo amin'ny tantara. Nahoana no faritana toy ny ‘lohany’ izy ireo?
Raha ny mikasika ny trangana kolikoly, mihevitra i Wu Min (吴敏) fa tsy afaka manao na inona na inona manoloana ireo tomponandraikitra voafatotry ny kolikoly toy ireny ny vahoaka Sinoa. Ny manangana tranombakoka iray atokana ho an'ny kolikoly ho toy ny karazana ‘sangy ratsy’ sisa no hany azony atao.
Naneho hevitra ny mpampiasa aterineto iray fa ‘efa ao anatin'ny kolontsaina Sinoa ny kolikoly sy ny fitsipika miafina. Satria kolontsaina izany, tsy maintsy ho arovana tsara sy ho karohina. Tsy ampy ny fananganana tranombakoka; tokony hampiditra izany ao amin'ny Lisitry ny Lovan'ny Kolotsaina Tsy Azo Tsapain-tanana any amin'ny Firenena Mikambana’ isika. Mino aho fa misy kazarana ‘fiviliantsaina ara-moraly’ ao – misy tsy fahampian'ny rariny, hitsiny ary fahatsorana eo anivon'ny fiarahamonintsika. Ao anatin'ny tranga toy izao, ampiarahana amin'ny lesoky ny rafitra ara-tsosialintsika, no mahatonga ny kolikoly hiparitaka.
Nilaza ny Praiminisitra Sinoa Wen Jiabao tamin'ny volana Martsa fa mbola ‘voakasiky ny kolikoly’ ary iharan'ny “fampiharana tsy rariny ny lalàna sy fitondram-panjakana tsy mahomby” foana i Shina na teo aza ireo taona maro nanaovana ezaka hiadiana amin'ny kolikoly. Namoaka fitsipika etika ho an'ireo manampahefana tany am-piandohan'ity taona 2010 ity i Shina, izay mamaritra tsara ireo fomba fanao 52 tsy azo ekena.